-लघुवित्त कम्पनीमा लगानी गर्दा नाफा कि घाटा, हेर्नुहोस नागबेली लघुवित्तको कम्पनी बिश्लेषण :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
आइतबार, ०६ साउन २०७५, २२ : ०९
लघुवित्त कम्पनीमा लगानी गर्दा नाफा कि घाटा, हेर्नुहोस नागबेली लघुवित्तको कम्पनी बिश्लेषण
नागबेली लघुवित्त विकास बैङ्क लिमिटेड, कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०६६ साल जेठ २७ मा दर्ता भई २०६७ माघ ६ गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट लघुवित्त कारोबार गर्न स्वीकृति पाई कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यस कम्पनीले झापा, मोरङ र इलाममा गरी दश ओटा शाखाबाट सेवा पुर्याउँदै आएको छ क्रमिक रुपमा शाखा, उपशाखाहरुलाई वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ ।
कम्पनीको उद्देश्य सामाजिक र आर्थिक रुपमा पिछडिएका वर्गलाई समेटी उनीहरुमा आर्थिक सामाजिक रुपमा रुपान्तर गर्दै लगानी प्रवद्र्धन गर्न र गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने रहेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आव २०७३/७४ को चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा रू. ३ करोड ३७ लाख २९ हजार रहेको छ । यो नाफा गत आवको यसै समयको तुलनामा २३ प्रतिशतले बढी हो ।
खुद ब्याज आम्दानी बढेको र रू.९० लाख ३८ हजार खराब कर्जा उठाउन कम्पनी व्यवस्थापन सफल भएकाले नाफा बढेको हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५ करोड २६ लाख रहेको छ साथै कम्पनीले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू.८९ लाख २१ हजार छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ ।
वर्गिकरण : लघुवित्त
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू.३४९९
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू.५०९४
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. १४८४
१८० दिनको भारित औसत मूल्य : रू.३०५७.१९
अध्यक्ष : दिप बहादुर श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : कुमार याक्सो
प्रधान कार्यालय : विर्तामोड, झापा
शाखा : १०
स्टक टिकर : एनविविएल
११ मे २०१७ १० अगष्ट २०१७
स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन :-
मुभिङ् एभरेज :-
डमैनबत्ती बिश्लेषण : कम्पनीको ५८ दिनको कारोबारको अन्तिम दिनमा ह्याम्मर आकृति बनेको छ । यसले आगामी दिनमा शेयर मूल्य बढ्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआई : कम्पनीको ५८ दिनको कारोबारमा आरएसआइ न्यूट्रल जोन ( ६१ दशमलव ८३ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीद बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन : कम्पनीको ५८ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन १७ दशमलव शून्य ३ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ५८ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एक अर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्य रेखाभन्दा माथी छ । हालको मूल्य रू. ३ हजार ४ सय ९९ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भइ मूल्य महङ्गिएमा रू. ३ हजार ५ सय २१ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने सस्तिएमा रू.३ हजार ४ सय ८१ मा टेवा पाउन सक्छ ।
खरीद चाप : कम्पनीको बिहीवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा बिक्री चापको तुलनामा खरीद चाप साढे ६ गुणा बढी भएको छ । सो अवधिसम्म ३ हजार २ सय ८० कित्ता शेयर खरीद र ४ सय ९० कित्ता शेयर बिक्री गर्ने माग रहेको थियो ।
कम्पनीका महत्वपूर्ण वित्तीय परिसूचकहरु (रू. हजारमा ) :-
कम्पनीको चौंथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७२/७३ बीच तुलना गर्दा :
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आव २०७३/७४ को चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा रू. ३ करोड ३७ लाख २९ हजार रहेको छ । यो नाफा गत आवको यसै समयको तुलनामा २३ प्रतिशतले बढी हो । खुद ब्याज आम्दानी बढेको र रू.९० लाख ३८ हजार खराब कर्जा उठाउँन कम्पनी व्यवस्थापन सफल भएकाले नाफा बढेको हो ।
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा ६८ दशमलव ३९ प्रतिशतबाट घटेर ६४ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतमा सिमित भएको छ भने चुक्तापूँजी रू.५ करोड २६ लाख पुगेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ३१ प्रतिशतले बढी हो ।
यो त्रैमासमा कम्पनीको जगेडा कोषको रकममा वृद्धि भई रू. ७ करोड ६५ लाख पुगेको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनाम १ सय ४६ प्रतिशतले बढी हो ।
कम्पनीको निक्षेप ४९ प्रतिशतले बढेर रू.१७ करोड ८ लाख र कर्जा तथा सापटी २६ प्रतिशतले बढेर रू.६२ करोड ४० लाख पुगेको छ । लगानी रू.५ लाख रहेको छ ।
खुद ब्याज आम्दानी रू.७ करोड ३० लाख, कर्मचारी खर्च रू.२ करोड १६ लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू.१ करोड ४९ हजार र सञ्चालन नाफा रू. ४ करोड ३९ लाख पुगेको छ ।
स्थिर सम्पत्ति २५ प्रतिशतले बढेर रू.१ करोड १८ लाख र अन्य सम्पत्ति साढे ३ गुणाले बढेर रू.१ करोड ५६ लाख रहेको छ ।
पूँजीकोष लागत ८ प्रतिशत र पूँजीकोष पर्याप्तता १७ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको छ ।
सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू.८९ लाख २१ हजार छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ ।
कम्पनीको चौंथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी(वार्षिक)६४ दशमलव शून्य ७, मूल्य आम्दानी अनुपात ४९ दशमलव १६, तरलता अनुपात २० दशमलव ८३ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २ सय ९ दशमलव २० रहेको छ । बिहीवारको शेयर मूल्य नेटवर्थको साढे १६ गुणा छ ।